China Japan Barbecue grill harato orinasa sy mpanamboatra | Jinqu Metal
Ny bolongarantsika japoney dia antsoina koa hoe japon azo atsipy any Japon.
Ny harato azo ampiasaina dia ampiasaina betsaka amin'ny BBQ arina, toy ny lozisialy Hibachi japoney, lafaoro arina fivarotana BBQ japoney.
Ny harato barbecue azo ampiasaina dia miaraka amin'ny vidiny mirary, tsy mila manasa, mamonjy asa, mavesatra ary mora entina amin'ny barbecue.
Torohevitry ny habe malaza:
Boribory grill-Flat type
Savaivony tariby 0.85mm
Size 200mm, 230mm, 237mm, 240mm, 245mm, 250mm, 260mm, 263mm, 270mm, 280mm, 285mm, 300mm, 445mm
Boribory grill-karazana ARC
Size 240mm, 260mm, 270mm, 280mm, 295mm, 300mm, 330mm
Boribory grill toradroa
Savaivony tariby 0.9mm, 0.95mm, 1.0mm
Size 220 * 220mm, 225 * 225mm, 240 * 240mm, 250 * 250mm, 280 * 280mm, 300 * 300mm
Savaivony tariby 0.95mm
Size 155 * 215mm, 167 * 216mm, 170 * 305mm, 170 * 330mm, 170 * 392mm, 180 * 280mm, 198 * 337mm, 200 * 300mm, 200 * 330mm, 210 * 270mm, 240 * 300mm, 250 * 450mm, 260 * 390mm, 270 * 175mm, 400 * 300mm, 400 * 350mm, 450 * 185mm
Ireo habe malaza etsy ambony dia feno tahiry avokoa. Vonona ny halefa amin'ny fotoana rehetra!
Niditra tao amin'ny tsenan'i Japoney nandritra ny 15 taona ny jiro tariby BBQ fanaovanay. Ankehitriny dia iray amin'ireo mpamatsy azo antoka indrindra izahay ary manana ny lazany any Japon ny marika anay.
Ny fitomboan'ny orinasanay sy ny fanitarana dia mifandraika amin'ny fanohanana sy fahatokisana maharitra ataon'ny mpanjifanay. Hanao ezaka 100% hanao tsara kokoa isika.
8) Fanamarinana ny fitsapana an'ny ISO9001, SGS ary antoko fahatelo.
Momba ny fonosana, mavesatra 100 grill net no feno harona plastika sy kitapo plastika roa (200 piraso) ao anaty baoritra. Ny habe samihafa dia mety afangaro mba hampidirana fitoeram-bokatra iray feno, izay afaka hitsitsy ny vidinao. Azontsika atao ny manamboatra lasitra hamaly ny takiana habe samihafa anananao.
Tongasoa ny fanontanianao amin'ny fotoana rehetra!
Teo aloha: Korea Barbecue grill harato
Manaraka: Fantsom-bozaka azo ampiasaina amin'ny kianja azo ampiasaina
Grill harato ho an'ny Bbq
Grill Screen harato
Grill Wire harato fandrahoan-tsakafo
Metal Grill Mesh ho an'ny Bbq
Steel Grill harato